Thumela ezona ndlela zintle ze-imeyile ngeli xesha leholide | Martech Zone
Thumela ezona ndlela zintle ze-imeyile ngeli xesha leholide
NgoLwesithathu, Novemba 9, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 Douglas Karr
Abathengi bathanda ukuthengisa nge-imeyile. Ngapha koko, nini kuphononongweAbathengi bathi i-imeyile yenye yeendlela zabo abazithandayo zokufumana izaphulelo kunye nezaphulelo kumashishini abasebenza nawo. Ixesha leeholide alinokwahluka kwaye kufuneka ucwangcise ngokufanelekileyo. Vavanya, icandelo kunye nokwandisa rhoqo ii-imeyile zakho ngeli xesha leholide kwaye unokuqhuba ishishini elininzi!
Martech Zone kwaye UDelivra sivelise le infographic ukukunceda ucwangcise ixesha lakho le-imeyile ngokufanelekileyo, ukubonelela nge uluhlu lwe-imeyile olulungileyo, ikhalenda kwiirhafu ezivulekileyo, kunye neendlela ezongezelelweyo zokuvavanya kunye nokwahlula abathengi bakho.
tags: Krisimesiezona ndlela zilungileyo ze-imeyileIshedyuli yeeholide ye-imeyileemail Marketingiiholide
Iindlela zokuJolisa kwiWebhusayithi yakho
Yongeza iphepha lekhonkco kwitemplate yakho yeWordPress